बेट्टे, सिल्भिया र लौरा। तीन युगका लागि तीन घातक महिलाहरू वर्तमान साहित्य
तीन घातक महिला
मैले भर्खर पढें बेट्टी, आइसल्याण्डिक लेखकको पछिल्लो उपन्यास अर्नाल्डुर इन्ड्रिडासन, Nordic अपराध उपन्यास को अर्को महान नाम। यो तीन दिनसम्म चल्यो, तर यो छोटो छ र यसले लामो लिने छैन। यो इन्द्रिडसनद्वारा दोस्रो हो कि मैले पढें किनभने मलाई यो मनपर्‍यो हरियो मा महिला, म उनको इन्स्पेक्टर मनपराउन छैन एरलेन्डर स्वेइन्सन। तर यो एक मेरो ध्यान आकर्षित गरेको थियो किनकि २०० classic मा पहिलो पटक प्रकाशित भएको अधिक क्लासिक कथामा मोडिएको थियो।
यो वास्तवमै प्रतिष्ठित हो सबैभन्दा प्रमाणिक परम्परालाई श्रद्धांजलि को आंकडा मा noir को femme fatale। थप रूपमा, यो धेरै राम्रो छ हेरफेर को स्पर्श (र आफ्नै पूर्वाग्रहहरु मा पाठकको परीक्षा)। यसले तपाईंलाई बीचमा चकित पार्छ र तपाईंलाई एउटा प्रस्तुतिकरणमा फर्काउँदछ कि त्यतिन्जेल तपाईंले s० को दशकदेखि विश्वास गरेको हुनसक्दछ। सन्दर्भ। ती लौरा y सिल्भिया, को भेरा क्यास्परी y होवार्ड फास्ट.
con दशियल हम्मेट वा रेमंड चन्डलरको स्पर्शयस उपन्यासको इन्द्रिडसनलाई सफल बनाउनेसँग कुनै सरोकार छैन। सबै डिस्टेल गर्दछ क्लासिक्सम अधिक कालो उत्तर अमेरिकी दुबै यसको कथा र संरचना र षड्यन्त्रमा।
केवल चार मुख्य पात्रहरू। को पहिलो व्यक्ति कथनकर्ता, एक माछा मार्ने फ्लीटका धनी मालिक, उनको सहायक र उनको मोहक पत्नी, अपरिवर्तनीय बेट्टी। कथावाचक जेलबाट आफ्नो कथा बताउँछ। उनको नरकमा पसेको अस्थिर जोश, इच्छा र हेरफेर Bettý को लागी जुनून द्वारा। सबै एक को आयोग को लागी उत्तम अपराध। त्यसकारण हामी उनलाई सोधपुछ गराउँदछौं जुन उसलाई गरिएको थियो र त्यो किन र कसरी उनले जेलमा समाप्त भयो भन्ने कथासँग मिल्दोजुल्दो छ।
झूटा र गलतफहमीहरू कि एक बनाउन plot त्यो बग्छ छिटो र यो अन्त्य गर्ने सम्भव छैन (जुन सम्भव छैन भनेर) एक ओब्शनको पुष्टिकरणसँग समाप्त हुन्छ। Bettý सेयरहरू रहस्यमय पेस्टहरू फास्टको सिल्भिया र bewitch गर्न शक्ति लौरा डे क्यास्परीको साथ।
मा पोष्ट गरिएको 1960, अमेरिकी लेखक होवार्ड फास्ट (को लेखक स्पार्टाकस) कम्युनिष्ट पार्टीसँगको उनको सम्बन्धको लागि अझै कुख्यात अमेरिकी विरोधी गतिविधि समितिको ब्ल्याकलिस्टमा थिए। त्यसैले उसले यसको छद्म नाम प्रयोग गर्नुपर्‍यो ईवी कनिंघम उसको कामको राम्रो अंशमा हस्ताक्षर गर्न. पछि, विभिन्न रिसाइसेस पहिले नै उसको वास्तविक नाम बोक्छन्।
En सिल्भिया हामीसँग भेट्यौं एलन म्याक्लिन, एक जासूस, अन्वेषक पाठक र पूर्व एक इतिहास शिक्षक, एक करोडपतिले एक रहस्यमय महिला खोज्नको लागि भाडामा लिए तपाईलाई सिल्भिया नाम मात्र थाहा छ। उनको बारेमा कविताहरूको पुस्तक प्रकाशित भएको छ र धन्यवाद जुन उनले विगतको कठोर इतिहास पत्ता लगाउँछिन्। म्याक्लिनले उनलाई केटीले देश छोड्ने केहि पदचिह्न पछि यात्रामा खोज्छिन्।
द्वारा लिखित भेरा क्यास्परी en 1942, उपन्यास, नाटक र पटकथा लेखक यस शीर्षक संग ख्याती प्राप्त। दुई वर्ष पछी म पनि मा अनन्तता मिल्यो फिल्म अनुकूलन de ओटो प्रेमिन्जर, con जीन टियरनी र डाना एन्ड्रयूज अग्रणी जोडी को रूप मा। यो एक को रूप मा मानिन्छ फिल्म Noir को क्लासिक बीच क्लासिक.
यहाँ हामीसँग छ लौरा शिकार, यो के हो कामुक, बोल्ड र धेरै महत्वाकांक्षी, तर हामीले उनको बस्ने कोठामा कार्पेटमा मृत भेट्यौं। हुनेछ रूखहरू जसले आफ्नो रहस्यमय मृत्यु स्पष्ट गर्न कोसिस गर्छन्। वाल्डो लाइडेकर, एक विलक्षण लेखक जो लौराको प्रेमको अभिलाषा गर्छन्; शेल्बी बढ़ई, उनको मंगेतरर मार्क म्याकफर्सन, जासूस जसले केस अनुसन्धान गर्दछ र जो अघिल्लो व्यक्तिको जस्तो, लोराले उनीहरूमाथि गरेको मन्त्रको शिकार हुनेछ।
चाखलाग्दो कुरा, यसको ईतिहासको अतिरिक्त यसको प्रयोग हो बिभिन्न कथा आवाज। यी वैकल्पिक सर्वज्ञात रूपमा, अन्य पात्रहरूको विचारहरू प्रविष्ट गर्दै र कहिलेकाँही तिनीहरू उपस्थित हुँदैनन्। वाल्डो लिडेकर, मार्क म्याकफेरसन वा लउरा आफैले हामीलाई रहस्यमन्त्र सुल्झाउने संकेतहरू देखाइरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » बेट्टे, सिल्भिया र लौरा। तीन युगका लागि तीन घातक महिलाहरू
आफ्नो मनपर्ने पुस्तकहरू लेखिएको ठाउँमा